Kristu Ndivo Vanofanira Kukubatsira Kunzwisisa Zviri Kuitika Munyika
"Chenjerai, kuti murege kutapwa nomunhu novuchenjeri, nokunyengera kusina maturo, achitevera tsika dzavanhu nezvokuvamba zvenyika, asingateveri Kristu" (VaKorose 2:8).
Mumwe nemumwe wedu ane mavonero aainota zvinhu. Nenzira imwe chete, mumwe nemumwe wedu ane mavonero aanoita nyika ino. Ane manzwisisiro aanoita zvinhu zviri kuitika munyika.
Zvinhu zvinotitaridza nyika zvakawanda. Zvinhu izvi ndizvo zvaunofanira kungwarira. Vakawanda vanovona nyika mumapepanhau. Vanomirira kuudzwa nevatapi venhau. Vanongoinzwa nemakuhwa. Havana kumbotsvaka kuivona muBhaibheri. Bhaibheri rinotizivisa pamusoro pezvinhu zviri kuitika munyika. Rinotizivisa zvichaitika mangwana. Rinotizivisa zvatinofanira kuitavo isu.
Munyika mune mapato akasiyana siyana. Aya mapato ezvekutongwa nekurongwa kwedzinyika. Mapato aya ane mazano awo. Asi mamwe mazano acho haana kumira paShoko raMwari. Zvino, kune Vakristu vanongogamuchira mazano aya. Mukristu akasungunuka kuva nebato rake. Asi haafaniri kumira nemazano ose ose. Anofanira kugamuchira mazano epamweya. Bhaibheri rinotauravo pamusoro pekutongwa nekurongwa kwedzinyika. Asi vakawanda havazivi izvi. Vanofunga kuti harina charinotaura nezvazvo. Ichocho hachisi chokwadi.
Mwari vakatipa Shoko ravo. Shoko iri ndiro rinotitaridza mazano atinofanira kumira nawo. Ndiro rinofanira kutitungamirira. Ndiro rinofanira kutibatsira kunzwisisa zviri kuitika munyika. Ndiro rinofanira kutitaridza chokwadi muzvinhu zvose.
Mwari vane mavonero avanoita zvinhu. Mavonero aya ndiwo aunofanira kuitavo iwe. Shoko ravo chiedza. Ndicho chiedza chatinofanira kurarama machiri. Ndiko kuti tigare tichikunda. Ndiko kuti tibudirire pane zvose zvatinoita. Ndiko kuti tigare tiine mufaro. Tinozorarama nenzira iyi tiri munyika yakanyangara kudai. Zviri mairi zvinenge zvisisagoni kutikanganisa. Tinenge tava kugara tiri pamusoro pazvo. Hareruya!
Baba vandinoda. Ndinokutendai. Munondibatsira kunzwisisa zviri kuitika munyika. Munonditaridza mazano ekumira nawo. Shoko renyu ndiro chiedza changu. Ndicho chiedza chandinorarama machiri. Handikanganiswi nezvinhu zvenyika ino. Ndinogara ndiri pamusoro pazvo. Nyika ino yakanyangara hayo. Asi ndine hutano hweVamwari. Ndine fuma yakawanda. Ndinokurira zvose zvandinosangana nazvo. Ndinobudirira pane zvose zvandinoita. Muzita raJesu. Ameni.
VaRoma 16:17 AMPC
Muvhuro, 18 Mbudzi 2019)